N'agbanyeghị nkatọ na afọ gara aga, Pixel 3 XL ga-ewere ọkwa ma dị ka nke a | Gam akporosis
N'agbanyeghị nkatọ na afọ gara aga, Pixel 3 XL ga-ewere ọkwa ma dị ka nke a
Ndị na-emepụta ihe mkpuchi bụ ndị mbụ na-ebu ụzọ nweta akara ọhụụ ọhụrụ nke ga-erute ahịa, opekata mpe ozi dị mkpa iji nwee ike ịmalite igwe maka rụpụta ihe kwekọrọ na yaN'ihi ya, n'ọtụtụ oge, ndị a bụ ndị mbụ na-enyocha otú njedebe ndị ọzọ ga-esi nweta ahịa ahụ.
Izu ole na ole gara aga, anyị gosiri gị mkpuchi mbụ nke Galaxy Note 9. Taa, ọ bụ ntụgharị nke Google Pixel 3 na Google Pixel 3 XL. Dịka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo nke AndroidPure nwere nweta, Google Pixel 3 XL ga-eji ogwe aka nabata ọkwa ahụ nke aburula ndi mmadu na ama ama.
Ọ dị egwu na ụlọ ọrụ ahụ etinyela ya n'ọrụ, kemgbe afọ gara aga, n'oge ngosi nke Google Pixel 2 na Pixel 2 XL, nnukwu ọchụchọ ahụ na-akwa emo na ihe kariri otu oge ọ mara na o webatara izu ole na ole tupu iPhone X. Ma, anyị amatalarị Google, ọ bụghị oge mbụ ọ na-akatọ mkpebi Apple ọ bụla ịnakwere ya n'afọ na-esote ya dịka ọ gosipụtara echiche ya na ya.
Ihe onyonyo nke ihe Pixel 3 na nke Pixel 3 XL gosiputara otu Google na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'otu igwefoto n'azụ, ekele maka nnukwu ihe ịga nke ọma nke onye bu ya ụzọ. Mmetụta na-adịghị mma nke Pixel nyere bụ n'ihi ngwanrọ nke, yana otu mgbawa doro anya, na-ahụ maka ịme ihe zuru oke zuru oke, mana nke ahụ erughị ogo nke ọnụ na-eme igwefoto abụọ.
Otú ọ dị, mma anya nke Google Pixel 3 XL nyere pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdụ niile nke dị ugbu a n'ahịa, igwefoto nke ọtụtụ ndị ọrụ Apple ga-achọ ịhụ n'ọgbọ nke ọzọ nke iPhone, na ha ekwuola mgbe ụfọdụ na ha ga-agbanye gam akporo naanị maka igwefoto Google Pixel 2 XL.
Ruo afọ ole na ole gara aga, igwefoto iPhone bụ akara ahịa n'ụwa nke ekwentị mkpanaaka. Agbanyeghị, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị Samsung na Huawei ugbu a, ejidela ya n'aka nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » N'agbanyeghị nkatọ na afọ gara aga, Pixel 3 XL ga-ewere ọkwa ma dị ka nke a
Paspọtụ Telegram: Chekwaa akwụkwọ njirimara gị na Telegram
Ihe nkiri mbụ nke Galaxy Tab S4 bụ leaked